ग्रहचक्रमा बुधको राशि परिवर्तन, यी राशिलाई हुनेछ वरदान ! – Ramailo Sandesh
ग्रहचक्रमा बुधको राशि परिवर्तन, यी राशिलाई हुनेछ वरदान !
बुध ग्रह आज राति ९ बजेर ९ मिनेटबाट मेष राशिमा प्रवेश गर्दै छ। यस राशिमा बुध ग्रह १ मे सम्म अवस्थित रहेनछ। त्यसपछि यो वृष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। ज्योतिषशास्त्रमा बुध ग्रहलाई सञ्चार, बुद्धि, छाला, हरियो रंग, लेखन आदिको कारक कारक मानिन्छ। बुध ग्रह मेष राशिमा प्रवेश गर्नाले ५ वटा राशिलाई अत्यन्त शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ।
यस अवधिमा तपाईंको कार्य सरलताका साथ पूरा हुनुका साथै लाभ प्राप्त हुनेछ। तपाईंको साहस र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। तपाईंले गरेको काम र लिएको निर्णयको सराहना गरिनेछ। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि यो समय अत्यन्त शुभ रहनेछ। आर्थिक पक्ष मजबूत रहन्छ। तर आर्थिक लेन-देनमा भने ध्यान दिनुहोला। शत्रुसँग सावधान रहनुहोस्।
कार्य व्यापारको विस्तार हुनेछ। आयका साधनमा वृद्धि हुनेछ। मित्र तथा आफन्तबाट सुखद समाचार प्राप्त हुनेछ। व्यापारीहरुको लागि समय अनुकूल रहनेछ। नयाँ व्यवसाय आरम्भ गर्नको लागि अवसर अनुकूल रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम रहनेछ। पदोन्नतीको योग रहेको छ।
यो समयमा तपाईंलाई भाग्यले पूरा साथ दिनेछ। विदेशी कम्पनीहरूमा सेवा वा नागरिकताको लागि गरिएका प्रयासहरू पनि सफल हुनेछन्। धर्म कर्मको काममा तपाईंको रुचि बढ्नेछ। सन्तान सम्बन्धि चिन्ताबाट मुक्ति मिल्नेछ। नव दम्पतिको लागि सन्तान प्राप्तिको योग रहेको छ। सरकारी क्षेत्रबाट विशेष सफलता मिल्ने सम्भावना उच्च छ।
कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीबाट पूरा साथ सहयोगको अपेक्षा राख्न सकिन्छ। विवाह सम्बन्धि वार्ता सफल रहनेछ। ससुराल पक्षबाट सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता आउनेछ। व्यापरीहरुको लागि त यो समय अत्यन्त शुभ साबित हुनेछ। सरकारी काम गर्ने मानिसको पानी समय शुभ नै रहने देखिन्छ।
विद्यार्थी वर्गको लागि यो समय कुनै वरदान भन्दा कम हुनेछैन। पढाईमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सफल हुनेछन्। सन्तान प्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुनेछ। नव दम्पतिको लागि सन्तान प्राप्तिको योग रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध बलियो हुनेछ। शत्रु तथा प्रतिस्पर्धी पराजित हुनेछन्। दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय तरिकाले नै बित्नेछ।